Izikhwama Zesikhumba se-OEM, Umkhiqizi Wezikhwama Zasemuva | UGaofeng
Ukugxila efektri ekukhiqizweni kwemithwalo Iminyaka engu-20 yothando nangobungcweti.
20 Iminyaka engama-20
Ochwepheshe ekukhiqizweni kwazo zonke izinhlobo zemikhiqizo yezikhumba nezesikhumba, abagxile ekuhlinzekeni
nezinsizakalo eziguqukayo ze-OEM kumakhasimende.
Abakhiqizi be-Professional Handbag yemifino evunyelwe ukukhiqizwa kwesikhumba
Ukuvalwa kwesikhwama semagneti lesikhumba semikhwama ngesandla https://gfbags.com
I-China Briefcase nylon Indwangu yebhizinisi lezisebenzi zemikhakha eminingi
Isikhwama semfushane sebhokisi le-nylon lesikhwama semisebenzi eminingi
Umhlobiso wendwangu ye-Messenger Bags enhle kakhulu nge-Supplement yesikhumba
Umhlobiso wendwangu ye-Messenger Bags enhle kakhulu nge-Supplement yesikhumba. Isikhwama somhlobiso wendwangu ye-Messenger Bag ngesikhumba Ngemuva kweminyaka yokuhlola nokuzijwayeza, izikhwama zeShenzhen Gaofeng Co, Ltd isungule uhlelo lokulawula ikhwalithi ephelele. Lo mkhiqizo wenza umsebenzi ube lula futhi wehlise isidingo sokuqasha abantu abaningi. Lokhu kuholele ekwehlisweni kwezindleko zabasebenzi. Izikhwama zomthungi wesilayezi se-Messenger lesikhumba Lo mkhiqizo uphephile ukuwusebenzisa. Awekho ama-dyes anobuthi kanye nama-ejenti asetshenziswa ekwakhiweni noma ezintweni zawo ngenkathi kukhiqizwa.
I-China Handbag Ukuluka ukuphatha abakhiqizi bezimbobo zesikhumba be-microfiber-
Isikhwama sokuluka isandla siphatha ukuvalwa kwesembozo sesikhumba se-microfiber https://gfbags.com
Ukuxoxa ngaphambi kokukhiqiza
Noma ngabe kunomhlangano wangaphambi kokukhiqizwa owedlule, kepha ngaphambi kwesinyathelo ngasinye senqubo, sisenengxoxo encane, kufaka phakathi ukuthi ungawenza kanjani umsebenzi ngendlela efanele, ukuthi ukusika kanjani lokho okuqukethwe kuzoba wonga kakhulu, yiziphi izinkinga esingabhekana nazo ngesikhathi sokukhiqiza inqubo, kufanele sibheke zonke izingqinamba. Umhlangano wangaphambi kokukhiqiza ugxile kuyo yonke inqubo yokukhiqiza, futhi le ngxoxo encane ihloselwe kwinqubo ngayinye yokukhiqiza, futhi izingqinamba abazidingida zizochazwa kabanzi.
Idizayini noma isampula noma imibono yakho, Ukutadisha okwenzeka, setha uhlelo lokuthuthukisa;
Khetha izinto zokwakha, umbala, nezindlela zokufaka ilogo;
Ukwenza isampula, 5.1 Kuthunyelwa isampula yokuhlola kwamakhasimende 5.2 Isampula yokuhlola;
Qinisekisa ukuthi isifanekiso singena kwinqubo yokukhiqiza. Uma ungenelisekile, buyela esinyweni sesibili, Ukwenza isampula yokukhiqiza kwangaphambili kanye nokuhlola isampula;
Ukukhiqiza, Ukuhlola imikhiqizo eqediwe, Ukupakisha, Ukuhambisa.
UGaofeng ugxile ekukhiqizweni kwezimpahla ezahlukahlukene zesikhumba nezikhwama, aze afinyelele ekukhiqizweni kwezinye izindwangu ezikhethekile.UGaofeng usekwe emcabangweni wokuthi ikhwalithi iyindlela yokusinda, ama-vvhas abekulawula ngokuqinile ukukhiqizwa.Ukuqala kwangaphambi kokuqalwa kokuhlolwa komkhiqizo kuqediwe , silwela ukuba phambili.
Singochwepheshe ekunikezelweni kwezinsizakalo ze-OEM nezimo kumakhasimende ethu, ngaphezu kwamamitha skwele ayi-2000 weworkshop, Njalo ukufakwa kwehlisile ukucabanga kwethu ngomsebenzi kanye nenhloso yama-esthetics.